Ihotele yasePhung Hung-amagumbi abanzi kunye neBar eluphahleni
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguHue
Wamkelekile kwiPhung Hung Boutique Hotel! Ihotele yethu inamagumbi angama-36 anoyilo lwangoku kunye namagumbi abucala abanzi. Ihotele yethu ibekwe kumbindi weAn Thoi Ward. Yimizuzu eli-15 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya sasePhu Quoc. Ihotele ineetheko ezimbini zomtshato ezitofotofo zeentlanganiso, iinkomfa, imitshato, kunye nezinye iziganeko ezikhethekileyo ukuya kwiindwendwe ezingama-800. I-Rooftop Bar & Lounge inoyilo lwangoku olunochuku lwakudala kunye nombono obanzi wolwandle kumgangatho we-5.
I-Rooftop Bar & Lounge kumgangatho wesihlanu wehotele inombono wonke wemoto yentambo. Iindwendwe zethu ziyakunikwa ukutya kwemini yonke kunye nePhu Quoc's cuisines yendabuko, izitya zaseAsia kunye nezaseNtshona kunye neziselo ezixubileyo kunye neebhiya zamazwe aphesheya ezidumileyo kunye newayini kwihlabathi liphela.
Unokuhamba uye kwimarike yeAn Thoi okanye ecaweni ngomzuzu omnye. Ihotele yethu ikufuphi ne-An Thoi Pier, i-Hon Thom Cable Car Station, i-Phu Quoc Prision, iiFactory Sauce yeentlanzi kwaye ngokukodwa iilwandle ezintle kakhulu kwiPhu Quoc Island.
Umbuki zindwendwe ngu- Hue
Abasebenzi bethu bafumaneka 24/7. Ungaqhagamshelana nathi nanini na xa ufuna.